Balotello Oo Dhaleeceeyay Xildhibaan Madow ah oo Talyaaniga Laga Doortay - Horn Cable TV
Balotello Oo Dhaleeceeyay Xildhibaan Madow ah oo Talyaaniga Laga Doortay
0	Maarso 8, 2018 10:33 am
Ciyaaryahanka caanka ah ee kubbadda cagta ee dalka Talyaaniga Mario Balotello ayaa fariin uu soo dhigay bartiisa Facebook Waxa uu ku dhaleeceeyay nin xildhibaan madoow ah oo ka soo baxay doorashadii dhawaan ka dhacaday dalkaasi Talyaaniga, kaasi oo noqoday xildhibaan ka tirsan Aqalka Sare Ee Dalkaasi.
Xildhibaanka oo Asal ahaan ka soo jeeda dalkaasi Nigeria ayaa lagu Magacaabaa Mr Iwobi ayaa noqoday xidhibaankii uu horeeyay ee Madaw ah ee ka soo jeeda Dalalka Afrika, isga oo mudo dheer ku noolaa wadankaasi.
Balotello ayaa sheegay in ay tahay ‘ceeb’ iyo wax laga xumaado in nin madoow ah uu matali karo siyaasadaha xisbigan oo ku caan baxay diidmada dadka madoow iyo dadka soogalootiga ah ee ay ku midoobeen xisbiyada badan ee lega.
Ciyaaryahan Balotello ayaa kamida ah dadka inta badan ka hadla takoorka lagu hayo dadka Madawga ah ee ku nool dalalka reer Yurub.
Germany : Xukun Lagu Riday Koox Weerartay Xero Qaxooti.
Madaxweynaha Somaliya oo kulan la Qaatay Gudoomiyeyaasha Degmooyinka G/Benaadir.